Jwxo-shiil oo Meel Walba Laggaga Adkaaday – Rasaasa News
Apr 6, 2010 fananad, Jwxo-shiil
Fanaanad ka mid ah fanaantii uu Jwxo-shiil, sida khaldan uga faa,iidaysan jiray ayaa xalay gaadhay Addis Ababa. Waxaana si wanaagsan u soo dhaweeyey masuuliyiin ka socota Kaalinka 5aad, fanaanada gaadhay Addis Ababa ayaa waxay ka mid tahay fananatii qarankii Somaliya, bariyihii u dambaysayna waxay taageeri jirtay Jwxo-shiil.
Jwxo-shiil, oo ay haysato fashilaad wayn ayaa waxaa ka baxay gudaha Somalida Ogadeeniya dhamaan ciidankii uu kala jabiyey ee uu lahaa ururka ONLF, kuwaasi oo badankoodu iska xaadiriyey dalka Kenya.
Waxaa kale oo Jwxo-shiil ka soo xidhmay dhaqaalihii uu ka uruusan jiray Jaaliyaadka. Waxaa kale oo soo xidhmay taageeradii Eritrea ee dhibaatada badnayd, oo iyadu haatan cudhaadh u haysata Ina-dhuubo.
Jwxo-shiil, ayaa waxaa haatan ka kala tagay kooxihii ku caawin jiray muusiga, sida Jaango, Cabdi Xaafid iyo cadar oo iyadu tagtayba Addis Ababa.
Dambiile Jwxo-shiil, ayaa jooga South Afrika, kana soo cararay Eritrea, waxaana uu aad uga walaacsan yahay meeshii uu ku noolaan lahaa dhawrka sano ee nolosha uga dhiman. Lama ogga meesha uu uga kicitimidoona dalka South Afrika.